Kazakhstan: Baikoana Hanao Blaogy ? · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: Baikoana Hanao Blaogy ?
Voadika ny 02 Aogositra 2017 2:56 GMT
roose, izay nanao blaogy ao Kazakhstan ao amin'ny vovonana YVision.kz dia nametraka an-tserasera ny taratasim-pifandraisana iray nalefan'ny fitantanana ho an'ireo tompon'andraikitry ny sekoly ambaratonga faharoa sy ambony ary teknika sy fianarana asa eo amin'ny firenena, taratasy ahitana ireo fepetra amin'ny fampiasàna ny vavahadin-tserasera fametrahana lahatsary KazTube.Kz, najoro tamin'ny febroary 2009 tamin'ny alàlan'ny tetibolam-panjakana. Asaina manokana ireo tale mba hampiakatra tsy tapaka ireo lahatsary mikasika ireo “zavtra manandanja mitranga any anatin'ireo toeram-pianarana iadidiany”
Atambatr'i akost [rosiana] amin'io “fijery mitodika amin'ny famarotana” io ilay iray nanjaka nandritra ny vanim-potoana sovietika, fony “noterena ny olona rehefa ‘subbotniks’ ( hiasa maimaimpoana isaky ny Sabotsy hanadio ny faritra), ankehitriny terena indray ireo olona handefa ireo lahatsary any amin'ireo vavahadin-tserasera ratsiratsy.” Mihevitra i bakha [rosiana] fa mba “nandanilany fahatàny volabe tamin'io tetikasa io ireo tomponandraikitra ka itadiavan'izy ireo fomba ankehitriny ny hanamarinana azy amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fidirana voarindra ao amin'izy io”. Tamin'io fotoana io ihany, manamarika amin'ny hanihany [rosiana] i Kimberly fa ny “sangisangy” no matetika fampiasa ao amin'ny KazTube.
Ao anatin'ny vanimpotoanan'ireo fanitsiana fantatra tsara mikasika ny fitsipika amin'ny aterineto sy ny fankatoavana azy ireny avy tamin'ny parlemanta, tsy olana ny misaina fa ho lasa fanao mahazatra tsy ho ela ny fomba toy izany. Afaka manao fanahy iniana misakana ny fampandrosoana ny tranonkala 2.0 miaraka amin'ireo votoatiny noforonin'ireo mpampiasa azy i Kazakhstan, mba hanoloana azy aminà “votoaty ankatoavin'ny governemanta”.
Miahiahy [rosiana] i Kuanyshbek Yesekeyev, izay mitantana ny Masoivoho misahana ireo Teknolojia amin'ny Aterineto sy ny Serasera, izay fototra nahitàna ireo fanitsiana ireny fa:
“Tsy maintsy fehezina amin'ny lafiny sasany ny Aterineto. Raha malalaka loatra izy, mety hisy ao Kazakhstan ireo tranga mitovy amin'ireo tany Moldavia (rehefa nisy ny fitroaram-bahoaka nokarakaraina tamin'ny aterineto).”
Hatramin'izao, tsy nisy akony ireo tsikera. Tsy nisy afaka nanakana ny fandaniana io lalàna fanivànana tambajotra io na ireo fihaonana an-databatra boribory nataon'ireo mpiaro zo, na ireo taratasy nalefan'ireo mpanao gazety sy ireo mpanao politika ao amin'ny parlemanta, ary na ireo fanakianana mafy nataon'ny OSCE sy ireo fikambanana iraisam-pirenena aza. Nanamafy ny solontenan'ny OSCE amin'ny resaka fahalalahan'ireo media, Miklos Haraszti, fa midika ho fihemorana io lalàna io ary nangataka tamin'ny filoha Nazarbayev izay mba hampiasa ny vatony tsy azo hivalozana.
Hijanona ho firenena manana tantara miabo ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny ve i Kazakhstan, izay niala tamin'ny nahim-pony tsy hampiasa ireo fitaovam-piadiana nokleary ary nanolotra fandraisana andraikitra fampidirana isan-karazany, sa ho simbàny ny endriny ka hanome vahana ny sivana izy na eo aza ireo hetsi-panoheran'ny fiarahamonina eo an-toerana sy iraisam-pirenena? Efa nolanian'ny parlemantan'i Kazakhstan ireo fanitsiana ary efa natolony ny filoha ho soniavina.
Lahatsoratra navoaka ihany koa tamin'ny neweurasia